रेम्डिसिभिर ७४८ डोज भित्रियो, तत्कालको माग धान्ने – HostKhabar ::
रेम्डिसिभिर ७४८ डोज भित्रियो, तत्कालको माग धान्ने
काठमाडौँ : औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना सङ्क्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेर भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइरहेका बिरामीहरूका प्रयोग गर्ने औषधि आयातको जिम्मेवारी दिएको तीनमध्ये दुई कम्पनीले ७४८ डोज रेम्डिसिभिर नेपाल ल्याएका छन् ।
नेपालमा सो औषधि आयात गर्नको लागि अनुमति पाएका तीनवटा कम्पनीमध्ये हरेक कम्पनीलाई दुई-दुई हजार डोज औषधि ल्याउने अनुमति दिएसँगै ७४८ भाइल औषधि नेपाल आइपुगेको छ । अर्को कम्पनीले भने औषधि ल्याउने क्रममा रहेको जानकारी आफूहरूले पाएको प्रवक्ता केसीले बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले अहिले केही बिरामीलाई परीक्षणका रुपमा दिन शुरु गरिएको र तत्कालका लागि एक सय जना जतिका लागि आवश्यक हुने अनुमानका आधारमा हामीलाई एक हजारदेखि १५ सय डोजसम्म आवश्यक हुन सक्ने बताए ।
बिरामीको अवस्था हेरेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले निर्माण गरेको मापदण्डको आधारमा बिरामीहरूका लागि फरक फरक डोजमा रेम्डिसिभिर प्रदान गरिने डा. केसीले बताए । बिरामीको अवस्था हेरेर सात डोजको र ११ डोजको रेम्डिसिभिर प्रदान गरिने उनले बताए ।
कोरोना सङ्क्रमित सबैलाई यो औषधिको डोज दिइँदैन र यसले कोरोनालाई निको नै पार्ने भनेर प्रमाणित भइनसकेकाले गम्भीर अवस्थामा मात्रै यो औषधिको प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुमा दुई डोज दिएर छ दिनसम्म एकरएक डोज दिएर सात डोज र अर्को भनेको सुरुमा दुई डोज दिएर नौ दिनसम्म एकरएक डोज लिएर ११ डोज दिएर उपचार हुने गरेको उनले बताए ।
यो बिरामी तथा आफन्तले माग गरेर भन्दा पनि उनिहरूको अवस्थाको आधारमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिफारिस गरेको आधारमा डोज दिएर उपचार गरिने डा. केसीले बताए । नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट कोरोनाको उपचारमा सो औषधिको प्रयोग परीक्षणका रुपमा अनुमति दिएसँगै त्यसको कालोबजारी हुन थालेसँगै विभागले एकद्वार नीति लिँदै कालोबजारी कम गर्न तीन कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो ।
अहिलेसम्म कोरोनाको कुनै पनि औषधि तथा खोप पत्ता लागि नसकेको अवस्थामा इबोलाको उपचारमा प्रयोग हुने सो औषधि गम्भीर अवस्थामा भ्यान्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइरहेका सङ्क्रमितहरूका लागि निक्कै उपयोगी भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएसँगै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत यसलाइ सिफारिस गरेपछि नेपालमा यसको प्रयोग सुरु भएको डा. केसीले बताए ।
तीन कम्पनीले नेपालमा औषधि ल्याएपछि कुन कुन अस्पातलले त्यसको प्रयोग गरे भन्ने बारेमा औषधि व्यवस्था विभागले तथ्याङ्कसमेत राख्ने डा. केसीले बताए । तीन कम्पनीले भारतबाट औषधि ल्याउन अनुमति पाएको र सोही आधारमा बिरामीको सङ्क्रमणको आधारमा औषधि ल्याउने कार्य हुने डा. केसीले बताए । उनले औषधिको मूल्य सात हजार ६०० कायम गरिएको बताए ।
विश्वभरि अस्पतालहरूमा रेम्डिसिभिर नामक औषधिको प्रयोग गर्दा बिरामीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि विकसित भएका लक्षणहरू हराउने समय १५ दिनबाट ११ दिनमा झरेको देखिएको डा. केसीले बताए । उनले कोभिड–१९ का लागि यो उत्साहपूर्ण भएको तर रामवाण चाहिँ नहुने बताएका छन् ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।